सुझावहरू भ्यान Semalt: होई यू स्प्याम-बट्स कुन्ट स्टपपेन भ्यान हेट वर्स्टोरेन भ्यान यू विश्लेषक-वर्विजिंग्सन्फोर्टी
तपाईले आफ्नो खोज इञ्जिनको एनालिटिकल खाता र हुर्रेमा रेफरल ट्राफिकमा भएको वृद्धिलाई ध्यान दिनुहुन्छ! तपाईं खुशी हुनुहुन्छ किनकि कसैले लिंक गर्दै र क्लिक गरिरहेको छ। तर नजिकको परीक्षामा, तपाईंले महसुस गर्नुभयो कि यो वैध ट्राफिक होईन। वास्तवमा, तपाईं रेफरर स्पामको पछिल्लो शिकार हुनुहुन्छ, खोजी इन्जिनहरूमा लक्षित स्प्यामिंगको एक प्रकार।
यदि तपाईंलाई यी स्पामिंग बट्सले चोट पुर्‍याएको छ भने तपाईंले तिनीहरूलाई सकेसम्म चाँडो ब्लक गर्न आवश्यक पर्दछ। Semalt का ग्राहक सफलता प्रबन्धक अलेक्ज्याण्डर पेरेसुन्को विश्लेषकबाट वास्तविक डाटा कसरी पाउने भन्ने वर्णन गर्दछ।
तपाईंले दिमागमा राख्नु पर्छ कि कसैले पनि यी साइटहरूलाई तपाईंको साइटमा जानको लागि सोधेनन्। र तीनिहरू तपाइँको साइटमा हुँदा, तिनीहरू वैध प्रयोगकर्ताहरूका लागि विशाल स्रोतहरूको भण्डार गर्दै छन्। नतिजाको रूपमा, वैध आगन्तुकहरू निराश हुन्छन् जब तपाइँको साइटमा पहुँच गर्न कोशिस गर्दै र कहिँ खोज्न जान्छन्। थप रूपमा, स्प्यामरहरू राम्रो काममा निर्भर हुँदैन जब उनीहरू बोलाउँदछन्।
रेफरर स्पाम नेटवर्कहरू अनमास्क गर्न, तपाईंले उनीहरू पछाडि व्यक्ति पहिचान गर्न आवश्यक छ। एउटा साधारण तरिका WHOIS.net प्रयोग गर्नु हो। साधारण स्प्यामरहरूको सूची समावेश:
Ilovevitaly.com (र विभिन्न TLD भिन्नताहरू)
Darodar.com र अन्य सम्बन्धित उप-डोमेनहरू
अहिले, तपाई सायद सोचिरहनु भएको छ कि किन स्प्यामरले वेब क्रल गर्न यति धेरै प्रयास गर्‍यो। विभिन्न स्प्यामरहरू विभिन्न कारणका लागि यी छायावादी गतिविधिहरूमा संलग्न छन्।
यहाँ केहि शीर्ष स्प्यामरहरू छन् र किन कारणहरू उनीहरू यो गर्छन्।
यो सबै समयको सबैभन्दा खराब स्पामरहरू मध्ये एक हो। बोटले सीसा उत्पादनको लागि रेफरर स्पाम प्रयोग गर्दछ। साइटले के प्रस्ताव गर्दछ? वेब स्पाम। अनिवार्य रूपमा, त्यहाँ वेबमास्टरहरू छन् जसले वेब स्प्याम प्रदर्शन गर्न साइटलाई भुक्तानी गर्दछ लिडहरू उत्पन्न गर्नका लागि। बेन साइक्स स्प्यामिंग डोमेन पछाडि व्यक्ति हो। र उनी सार्वजनिक रुपमा आफ्नो WHOIS डेटा प्रदर्शन गर्न साहसी छन्।
अर्थव्यवस्था, darodar.com, र ilovevitaly.com
यी साइटहरूको दिमागमा एक उद्देश्य छ: ईबे वा AliExpress.com जस्ता विशिष्ट शपिंग साइटहरूमा ट्राफिक निर्देशित गर्न।
स्प्यामिंग बट्स खतरा रोकिदै
बट्स राख्नको लागि उत्तम तरीका भनेको तपाईको डोमेनको रूट डाइरेक्टरीमा .htaccess फाइल मार्फत रोक्नु हो। यो गर्नका लागि तपाईले एक खास कोड .htaccess फाइलमा पेस्ट गर्नुपर्नेछ। यस प्राविधिकले न केवल स्प्यामर्सलाई तपाईंको एनालिटिक्स उपकरणमा हस्तक्षेप गर्नबाट रोक्छ, तर प्रत्येक चोटि तपाईंको सर्वरमा हिर्काउने प्रयास गर्दा बट्सलाई पनि फ्ल्याग गर्दछ।
तपाईको डाइरेक्टरीमा .htaccess फाइलमा परिवर्तन गर्नु अघि, यो नोट गर्नु महत्त्वपूर्ण छ कि यो फाईल हो जसले तपाईंको सर्भरले कसरी कार्य गर्दछ भनेर निर्धारण गर्दछ। यदि तपाईंले फाइल अपलोड गर्दा गल्ती गर्नुभयो भने, यसले सम्पूर्ण साइटको कार्यप्रणालीमा हस्तक्षेप गर्दछ। यो हुनबाट रोक्नको लागि, फाईलमा कुनै परिवर्तनहरू गर्नु अघि तपाईंको साइटको ब्याक अप गर्ने विचार गर्नुहोस्।
माथिको विधि प्रयोग गर्नाले सबै स्प्यामरहरूलाई हटाउँदैन। जबकि यसले तपाईंलाई भविष्यको स्प्यामिंग प्रयासहरूबाट बचाउँदछ, यसले साइटमा पहिल्यै भइसकेको क्षतिलाई पूर्ववत गर्दैन। ऐतिहासिक जानकारीबाट छुटकारा पाउन र भविष्यमा निर्दिष्ट क्षेत्रहरूबाट स्प्याम बटलाई फिल्टर आउट गर्न सहयोग पुर्‍याउन, एनालिटिक्स फिल्टरहरू सेट अप गर्ने बारे विचार गर्नुहोस्।
स्प्यामरलाई बाहिर राख्न WordPress प्रयोग गर्दै
तपाईले अमान्य प्रयोगकर्ताहरूलाई राख्नका लागि WordPress को Wp-Ban प्लगइन प्रयोग गर्न पनि सक्नुहुन्छ। प्लगइनले तपाईंलाई ब्ल्यापलिस्ट आईपी, आईपी दायरा, प्रयोगकर्ता एजेन्ट, रेफरर यूआरएल र प्रयोगकर्ता एजेन्टलाई तपाईंको WordPress ब्लगहरू पहुँच गर्न सक्षम गर्दछ। यो दृष्टिकोण प्रयोग गरीरहेको वेब प्रशासकहरुको लागी एक उपयोगी विकल्प हो जुन उनीहरूको डोमेनको .htaccess फाइल सम्पादन गर्न सहज छैन।
स्प्याम बट्सले सर्भर लोड साथै सुरक्षालाई असर गर्दछ, वैध प्रयोगकर्ताहरूको दम घुटेर मार्केटिंग प्रयास विफल पार्दै विश्लेषण डेटालाई विकृत गर्दछ। ठुलो साइटमा, h०० हिट महिना धेरै परिवर्तन हुँदैन। तर यदि यो एक स्थानीय रिटेलरको साइटमा भयो भने, वैधानिक ट्राफिकको विश्लेषण एक अपहरण कार्य बन्छ। त्यसकारण एक अनुभवी विशेषज्ञलाई एनालिटिक्स आउटसोर्सिंग एक भ्रमपूर्ण डेटा लाई बेवास्ता गर्न र कम्पनीको प्रयासको लाभ लिनको एक प्रभावी तरीका हो।